အိမ်အချောသတ်ပြင်ဆင်သူများ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၆ ချက် - Myanmar Builders Guide
ကျွန်တော်တို့တွေ တော်တော်များများက ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အိမ်မှာပဲ အချိန်ကုန်ဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပြီး အိမ်ပိုင်တစ်ခုကို ရရှိပြီဆိုပါတော့ အိမ်ကို ဘယ်လို ကောင်းမွန်စွာဆောက်လုပ်နေထိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါတယ်။အခုချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုအတိုးတွေက အရမ်းသက်သာနေပြီး နေအိမ်မှ နေပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေက ပိုမိုများပြားလာပါတယ် ဒီတော့ နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို နေရာ လေးတစ်ခုခု ကောင်းကောင်းရှိနေသင့်တာပေါ့။
ဟာဝါရီရဲ့ နာမည်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ အိမ်ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Graham Builder ရဲ့ပြောကြားချက်အရ အိမ် ကောင်းမွန်စွာ နေရာ ချ ထားနိုင်ခြင်း ၊ တည်ဆောက်ထားနိုင်ခြင်းက သင့်အပေါ်သက်ရောက်နေတဲ့ အလုပ်ရဲ့ ဖိအားတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါသတဲ့။ဒီတစ်ခါမှာတော့ အိမ်ဆောက်သောသူများ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ၆ ချက် ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁ . မမျှော်လင့်ထားတာတွေ ကြုံရမည်လို့ မျှော်လင့်ထားပါ
သင်အိမ် ကိစ္စ ကို စလုပ်ပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အကူအညီ ရယူကာ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။သင့်ကိုသင် လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး ဘယ်အရာမှ မမှားနိုင်ဘူးဆိုပြီးမတွက်ပါနဲ့ ဒါကမမှားဖို့ လုံး၀မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ အမှားနည်းအောင်သာ လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ Graham Builders ဆောက်လုပ်ရေးမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Evan Fujimoto က အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုတာဟာ အမြဲတမ်း စိန်ခေါ်မှုတွေက ပြည့်နှက်နေတာပါ။ မမျှော်လင့်ထားလို့ ထည့်မတွက်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ ပြဿနာတွေ အမှားတွေ ကြုံရစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်တစ်ခု ပြင်ဆင်ခြင်းမလုပ်ခင် မျှော်လင့်မထားတောတွေ ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာ အမြဲထည့်တွက်ထားပါ။
၂ . မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်နှင့် စတင်ပါ
အာရုံထားရမှာက လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ကြာရှည်ခံနိုင်ဖို့ကို အမြဲသိထားပါ ဒါမှ သင့်လူနေမှုဘ၀ကို အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပုံစံကို သိထားပါ '' သင့်မိသားစုတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အိမ်ခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ဘယ်လို ပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုတာကို သိထားပါ ဒါမှသာလျှင်လိုအပ်ချက် နည်းနည်းနဲ့ အိမ်ကို သင်ရရှိမယ်သိရပါတယ်။
၃ . လက်တွေ့ကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ထားပါ
သင့်အိမ်ကို ဘယ်တော့ မှ ပြင်လို့မရနိုင်တဲ့ ပုံစံတွေ ကို သင် ရည်မှန်းချက် ထားပြီး ပြင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားပါနဲ့ သင့်အနေနဲ့ ၁၉၅၀ လောက်က အိမ်ကို ပြင်တယ်ဆိုပါတော့ သင့်အနေနဲ့ ၁၉၅၀ ကအိပ်ပုံစံဒီဇိုင်းကိုပဲ ပြင်နိုင်မှာပါ အခုခေတ် ကွန်ကရစ်နဲ့ဆောက်တဲ့ အိမ်တွေ ပုံစံမျိုးတွေ ပြင်နေလို့မရပါဘူးအကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ပုံစံတစ်ခုလုံးပြောင်းဖို့ စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ အစကနေ ပြင်ကြည့်ပေါ့ ပိုခက်ခဲမှုတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။
၄ . ကုန်ကျ စရိတ်လျော့ချခြင်း
ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ အချိန်ကုန် နည်းရင် ကုန်ကျစရိတ်လျော့မှာပါပဲ ။ သင့်အိမ်ရဲ့သေချာပြင်ဆင်ရမယ့်နေရာကို စရိတ် တိတိကျကျ တွက်ရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ပိုလျော့မယ် သေသေချာချာ ဖောင်ဒေးရှင်းချနိုင်ရင် ကုန်ကျ စရိတ်နည်းနိုင်ပါတယ်။
၅ . သင်နိုင်သလောက်နဲ့ ကျွမ်းကျင် ပညာ ရှင်တွေနဲ့ တွဲလုပ်ပါ
သင့်အနေနဲ့သင်သုံးနိုင်နဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်တွေကို ရှာဖွေပါ သင့်ရဲ့ လစဉ်ဝင်ငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းတာပါ သင့်အနေနဲ့ စျေးပေါလိုက်လွန်းပြီး သိပ်မတတ်တဲ့ သူတွေကို မငှားရမ်းပါနဲ့ သူတို့တွေနဲ့ ဆို အပျက်အစီးများ ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ များမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လုပ်တဲ့ သူမှ သာလျှင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိမိမိ ပြီးမှာပါ။
၆ . သင့်ကိုယ်သင်လေ့လာပါ
သင့်အနေနဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင် ကြိုတင်လေ့လာထားပြီး တီးမိ ခေါက်မိ ရှိအောင်လုပ်ထားပါ။နာမည်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ စာအုပ် ၊ ဆောင်းပါးများ ဖတ်ထားပါ။သင့်အနေနဲ့ အနောက်တိုင်းစတိုင် အိမ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ထဲက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Graham Builders ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစုရဲ့ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ " Building Your Home for Life” seminar ကိုကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
နှိပ်ပါ >>> " Building Your Home for Life”
Ref : HawaiiBusiness